खेलकुद – Nepal Online Khabar
Apr112021 by Nepal KhabarNo Comments
जब होटलबाट खेलाडी गायब भए पछि…
काठमाडौं : आहा–रारा गोल्डकप पोखरामा समापनको संघारमा छ । १९ औं संस्करणको प्रतियोगिताको फाईनलका लागि सं'कटा र अ'फ्रिकन रु'ट्स एसोसियसन शनिबार भिड्दैछन् । अफ्रिकन रुट्स आहा रारा खेल्नै नेपाल आएको हो । साहारा क्लब पोखराले प्रतियोगितालाई अन्तराष्ट्रिय चिनारी दिन विदेशी टिमको रुपमा अफ्रिकन रु'ट्सलाई सामेल गराएको हो । तर आहा रारा गोल्डकप खेल्न नेपाल आएको अफ्रि'कन रुट्सले यस बीचमा दुई गोल्डकप खेलिसक्यो । बागमती गोल्डकपको उपविजेता बनेको क्या'मरुनको टोली शुक्रबार राज'र्षी जनक कपको सेमि'फाईनलमा स्थानीय पिपल युथ क्लबसंग पराजित बन्यो । आहा रारा गोल्डकपको सेमिफाईनलमा पुलिस क्लबलाई हराउँदै अफ्रिकन रुट्स फाईनल पुगेको थियो । आयोजकले प्रतियोगिता अवधिभर अन्य स्थानमा खेल्न नजान अफ्रिकन टोलीलाई अनु'रोध गरेका थिए । आहा रारा खेल्नका लागि आएको उल्लेख गर्दै प्रतियोगिता अवधिभर अन्य खेल नखेल्ने अफ्रिकन
Apr22021 by Puja SharmaNo Comments
त्रिदेशीय कप फुटबलका विजेतालाई जनही चार लाख दिने निर्णय
काठमाडौं । सरकारले त्रिदेशीय कप फुटबलका विजेता खेलाडीलाई जनही रु चार लाख दिने निर्णय गरेको छ । शुक्रबार बिहान बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले सो निर्णय गरेको हो । बैठकले विजेता खेलाडीलाई जनही रु चार/चार लाख दिने निर्णय गरेको परराष्ट्रमन्त्री प्रदीपकुमार ज्ञवालीले जानकारी दिएका छन् ।सोमबार त्रिपुरेश्वरस्थित दशरथ रङ्गशालामा भएको फाइनल खेलमा नेपालले बंगलादेशलाई २–१ गोल अन्तरले पराजित गर्दै त्रिदेशीय कप फुटबलको उपाधि जितेको थियो । नेपालका लागि सन्जोग राई र विशाल राईले गोल गरेका थिए । ३७ वर्षपछि घरेलु मैदानमा उपाधि जितेको नेपालले पाँच हजार डलर पुरस्कार प्राप्त गरेको छ ।
Jan112021 by Nepal KhabarNo Comments
काठमाडौं : बङ्गलादेशमा सम्पन्न बङ्गबन्धु शेख मुजिब म्याराथनमा नेपालकी पुष्पा भण्डारीले भारतीय खेलाडीलाई उछिन्दै स्वर्ण पदक जितेकी छिन् । ढाकामा आज भएको दक्षिण एशियाली क्षेत्रको म्याराथनमा भण्डारीले निर्धारित दूरी दुई घण्टा ५९ मिनेट ४१ सेकेण्डमा पूरा गर्दै स्वर्ण पदक प्राप्त गरेकी हुन् सो स्पर्धामा भारतकी ज्योति गवातीले रजत पदक प्राप्त गरिन् । उनले निर्धारित दूरी तीन घण्टा ४६ सेकेण्डमा पूरा गरिन । सो प्रतियोगितामा भारतकै गिगमत डोल्माले तीन घण्टा नौ मिनेटमा निर्धारित दूरी पूरा गर्दै तेस्रो पदक जितिन् । गत वर्ष नेपालमै सम्पन्न १३औँ दक्षिण एशियाली खेलकूद (साग) मा भण्डारीले म्याराथनमा रजत पदक मात्र प्राप्त गरेकी थिइन् । भण्डारी विभागीय टोली सशस्त्र प्रहरी बलको एपिएफ क्लबमा आवद्ध छिन् । पुरुष म्याराथनमा नेपालका किरणसिं
Jan62021 by Nepal KhabarNo Comments
बधाई ! पब्जी मोबाइल ग्लोबल च्याम्पियनशिपको फाइनलमा पुग्यो नेपाली टिम, विजेताले २३ करोड ४० लाख पाउने…हेर्नुहोस् ।
काठमाडाैं : पब्जी मोबाइल ग्लोबल च्याम्पि'यनशिप (पीएमजीसी) २०२० को फाइनलमा नेपाली टिम ‘एब'रप्ट स्ले'यर’ प्रवेश गरेको छ । पीएमजीसीमा अब नेपाली टिमले उपाधिका लागि प्रति'स्पर्धा गर्नेछ । पब्जी मोबाइल ग्लोबल च्या'म्पियनशिप २०२० को फाइनल आगामी जनवरी २१ देखि २४ सम्म सञ्चालन हुनेछ । सुपर वि'केण्ड रा'उण्डमा स्लेयरले १० औं स्थान ओगट्दै ग्लोबल च्याम्पि|यनशिपको फाइनलमा आफ्नो स्थान सुरक्षित गरेको हो । यसअघि ‘पब्जी मोबाइल प्रो लिग साउथ एसिया’ को विजेता बनेको एबरप्ट स्लेयर र फस्ट रन'रअप भएको ‘द रियल सोल्डर’ (डीआरएस) ग्लोबल च्याम्पिय'नशिपका लागि छनौट भएका थिए । पब्जी मोबाइल ग्लोबल च्याम्पियनशिप २०२० मा नेपाली टिम एबरप्ट स्लेयर फाइनलमा प्रवेश गरेपनि डीआरएस भने सुपर विके'ण्ड चर'णबाटै बाहिरिएको थियो । फाइनलमा प्रवेश गरेको एबरप्ट स्लेयरले चार विके'ण्डको अवधिमा कूल ४५ खेलमा ३ सय १२ अंक बटुलेको थियो ।
Oct272020 by Nepal KhabarNo Comments
यी हुन् दिल्लीले सन्दिपलाई नखेलाउनुका ४ स्पष्ट कारण, तपाईं पनि चकित पर्नु हुनेछ ।
काठमाडौं : इन्डियन प्रिमियर लिग (आईपीएल)को १३औं संस्करण अहिले संयुक्त अरब एमिरेट्स (युएई)मा चलिरहेको छ । विश्वकै चर्चित र स्टार खेलाडीको जमघट हुने लिगलाई नेपालीहरुले पनि निकै पछ्याइरहेका छन् । एकजना स्वदेशी क्रिकेटरको पनि उपस्थिति भएकाले नेपालीको अतिरिक्त चासो आईपीएलमा छ । नेपालका युवा स्टार सन्दीप लामिछाने लगातार तेस्रोपटक आइपीएल खेलिरहेका छन् । तर, लिग चरणमा उनको टिम दिल्लीले १० वटा म्याच खेलिसक्दा पनि सन्दीप प्लेइङ ११ मा पर्न सकेका छैनन् । आगामी खेलहरुमा पनि उनले मौका पाउँछन् पाउँदैनन् भन्न सकिने अवस्था छैन । विश्वका अन्य लिगमा टिमका लागि प्राय पहिलो रोजाईमा पर्ने सन्दीप आइपीएलमा भने सुरुवाती खेलमा बेन्चमै छन् । आखिर किन सन्दीपले खेल्न पाएका छैनन् त ? आईपीएलमा विदेशी खेलाडीको कोटा आइपीएलमा प्रत्येक टिमले बढीमा ८ जनासम्म विदेशी खेलाडी आफ्नो टिममा राख्न पाउँछन् । त्यसमध्ये बढीमा
Oct262020 by Nepal KhabarNo Comments
यीनै हुन भलिबल खेलेर लाखौं नेपालीको मन जितेकी राष्ट्रिय खेलाडी सरस्वती चौधरी…हेर्नुहोस् ।
काठमाडौ : १३औं दक्षिण एसियाली खेलकुद सागको महिला भलिबल फाइनलमा भारतसँग पराजित भएपछि नेपाली खेलाडी कोर्टमै भक्कानिए। उपाधि जित्न सकेको भए सारा नेपाली खुसी हुन्थे। त्यो खेल पछाडी नेपालमा खेल जगतमा भने निकै उत्साहा छायो । नेपालमा पनि खेल क्षेत्रमा निकै सम्भावना रहेछ भन्ने आवाजहरु पनि आए । त्यो खेलमा मन जित्ने नेपाली एक चेलीको नाम हो सरस्वती चौधरी । राष्ट्रिय टिमकी महत्वपूर्ण स्पाइकरको परिचय बनाएकी सरस्वतीलाई ६ कक्षा पढ्दासम्म खेलकुदमा चासो थिएन। भलिबलबारे त सुनेकै थिइनन्। उनले जवाफ दिईन पत्रकारको प्रश्नमा । धनगढीमा जन्मिएकी उनको उचाइ भने भलिबल खेल्न उपयुक्त थियो। १२ वर्षमै ५ फिट ७ इन्च अग्ली सरस्वतीलाई स्थानीय प्रशिक्षक विष्णु चौधरीले भलिबल खेल्न सुझाए। सरस्वतीलाई प्रशिक्षण दिनसके भविष्यमा राम्रो खेलाडी बन्ने विश्वास विष्णुको थियो। तिम्रो हाइट राम्रो छ। जिउ पनि खेलाडीकोजस्तै छ। अभ्
Oct242020 by Nepal KhabarNo Comments
हिजो हारपछि दिल्लीका कप्तानले दिए आगामी खेलमा सन्दिपलाई खेलाउने संकेत, यसो भन्छन् श्रेयस एैयर…हेर्नुहोस् ।
युएइ : इन्डियन प्रिमियर लिग (आईपीएल) अन्तर्गत गएराति दिल्ली क्यापिटल्सलाई किङ्स इलाभेन पन्जाबले पराजित गरेको छ । पञ्जावसँग दिल्ली ५ विकेटले पराजित भएको हो । दिल्लीले दिएको १ सय ६५ रनको लक्ष्य पन्जाबले १९ ओभरमा मात्र ५ विकेट गुमाएर पुरा गर्यो । सिजनको पहिलो भेटमा दिल्लीले पन्जाबलाई सुपर ओभरमा हराएको थियो । यो जितसँगै पन्जाबले दिल्लीसँग सिजनको पहिलो भेटमा व्यहोरेको हारको बदला समेत लिएको छ ।जितसंगै पन्जाबले १० खेलमा ८ अंक जोडेको छ । जितसँगै पञ्जावको प्लेअपमा पुग्ने सम्भावना जिवितै रहेको छ । पन्जाब तालिकाको पाँचौ स्थानमा समेत उक्लिएको छ । दिल्लीको भने यो तेस्रो हार हो । दिल्लीले १० खेलमा १४ अंकसहित शीर्ष स्थानमै छ । दिल्लीले १० खेल खेलिसक्दा पनि नेपाली स्पिनर सन्दिप लामिछानेलाई भने अहिलेसम्म खेल्ने मौका दिएको छैन जसबाट नेपाली फ्यान निराश बनेका छन् । यसैबिचमा दिल्लीका कप्तान श्रेय
Oct232020 by Nepal KhabarNo Comments
काठमाडौं : इन्डियन प्रिमियर लिग (आइपिएल)मा नेपाली लेग स्पिनर सन्दीप लामिछाने आबद्ध दिल्ली क्यापिटल्सले उत्कृष्ट प्रदर्शन जारी नै राखेको छ । लिगमा ९ खेल खेलिसक्दा दिल्लीले ७ जित सहित शिर्ष स्थान कब्जा गरेको छ । तर दिल्ली ९ खेल खेलिसक्दा पनि अहिलेसम्म नेपाली स्टार स्पिनर सन्दिप लामिछानेले भने एउटा पनि खेल खेल्न पाएका छन् । सन्दीप यस पटक ११ भित्र नपर्नुको कारण हो, टीममा स्पिनर धेरै हुनु। सन्दीपले पहिलो सिजनबाटै दायाँ हाते लेग स्पिनर अमित मिश्रासँग प्रतिस्पर्धा गर्नु परेको थियो। दोस्रो सिजन मिश्रासँगै वायाँ हाते अर्थोडक्स अक्सर पटेल थपिए। दिल्लीमा जारी सिजन अर्का अनुभवी दायाँ हाते अफ स्पिनर रविचन्द्र अश्विन पनि थपिएका छन्। आश्विन र पटेल आवश्यकता परे ब्याटिङबाट पनि टीमलाई योगदान गर्न सक्छन्। जुन क्षमता तुलनात्मक रूपमा सन्दीपमा कम छ। त्यसकारण पनि सन्दीपलाई टीममा स्थान बनाउन कठिन परेक
Oct162020 by Nepal KhabarNo Comments
विनोद थापाले बनाए एक घण्टामा एक खुट्टाले सबैभन्दा बढी किक हानर विश्व कीर्तिमान…उहाँलाई हार्दिक बधाई ।
काठमाडौ : तेक्वान्दो खेलाडी विनोद थापाले मोष्ट मार्सल राउण्ड हाउस किक ईन वान आवर अर्थात एक घण्टामा एक खुट्टाले सबैभन्दा बढी किक हान्ने कीर्तिमान बनाएका छन् । विनोदले एक घण्टामा एक खुट्टाले दुई हजार सात सय पचास पटक किक हानेर कीर्तिमान बनाएका छन् । यो विधामा अहिलेसम्म कसैले पनि यस कीर्तिमान बनाएका छैनन् ।सुदूरपश्चिम प्रदेश तेक्वान्दो संघले धनगढीमा बिहीबार आयोजना गरेको कार्यक्रममा थापाले कीर्तिमान बनाएका हुन् । उनले दिउँसो ठिक १२ः३० मा सुरु भई १:३० सम्म एक घण्टामा २७५० किक हानेर कीर्तिमान बनाएका हुन् । धनगढी उप महानगरपालिकाका नगर प्रमुख नृप बहादुर ओडको प्रमुख आतिथ्यतामा भएको कार्यक्रम सुदुरपश्चिम प्रदेश तेक्वान्दो संघका अध्यक्ष सुवाश शाहीको अध्यक्षतामा भएको थियो । कार्यक्रममा कंचनपुर तेक्वान्दो संघका अध्यक्ष ज्ञानेन्द्र सिंह, सुदुरपस्चिम प्रदेश तेक्वान्दो संघका बरिष्ठ उपाध्यक्ष केश
Sep212020 by Nepal KhabarNo Comments
किन छुटाइए सागमा गौरवाशाली पदक जित्ने खेलाडीहरु मान पदवी र अलं’कारबाट…हेर्नुहोस् । (भिडियो सहित)
काठमाडौं : शब्दमा सम्मान गर्न कुनै क'ञ्जुस्याई गरिदैन । धेरै वि'शेषण भरेर पुलकित गराइन्छ । तर वास्तविक सम्मान गर्नु पर्दा कुन हदसम्म क'ञ्जुस्याई गरिन्छ भन्ने यसपटक प्र'ष्ट देखायो राज्यले । गर्विलो पदकका साथ नेपालमा सम्पन्न १३ औं सागमा नेपाली खेलाडीहरुले राष्ट्रलाई ऐतिहासिक सफलता दिलाउँदा सम्मानका शब्द यति खर्च गरिए तर रा'ष्ट्रपतिकोतर्फमा मान पदवी अलंकारको घोष'णा हुँदा सागमा कीर्ति'मानी पदक दिलाउन सफल धेरै खेलाडी त्यस्को लागि योग्य समेत सावित हुन सकेनन् । हरेक वर्षझै यस वर्ष पनि सरकारले संविधान दिवसको अवसरमा मुलुकलाई विभिन्न क्षेत्रबाट महत्वपूर्ण योगदान दिने व्यक्तिहरुलाई वि'भुषित र पदक दिने घो'षणा ग¥यो । यसपटक पनि करिब ६ सय जनालाई विभुषित र पदक दिने घो'षणा गरेको छ । तर, १३ औँ दक्षिण एसियाली खेलकुद सागमा मुलुकलाई ऐतिहासिक सफलता दिलाउने पदक विजेता खेलाडीहरु राज्यको त्यो मानपदवीको सू
बैंकबाट पाउनुहोस् बिना धितो १५ लाखसम्म ऋण (730)